सेञ्चुरी कमर्शियल बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (मङ्गलवार, ११ असोज २०७३)
२०७२/७३ आवको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार बैङ्कको खुद नाफा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत बढेको छ । जगेडा कोष ५ गुणा बढेको छ । बैङ्कले भदौ १८ गतेदेखि असोज ९ गतेसम्म १०ः३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : अन्तिम दिनमा सेतो लामो टुप्पी र छोटो पुच्छर भएको मैनबत्ती बनेको छ । शेयर मूल्य बढेपछि कारोबार सङ्ख्या घटेको छ ।
आरएसआई : न्यूट्रल जोन (४२ दशमलव १९ स्केल) मा छ । खरिदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : १३ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : २१ दिने औसत मूल्यरेखा र ७ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य र २१ दिने औसत मूल्यरेखा एकै ठाउँमा आएका छन् । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ४ सय ३६ मा टेवा पाउने सङ्केत देखिन्छ । मूल्य महँगिएमा रू. ४ सय ८० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २०७१/७२ आर्थिक वर्ष र २०७२/७३ आर्थिक वर्षबीच तुलना गर्दा
- बैङ्कको चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेर रू. ३८ करोड २६ लाख पुगेको छ । सञ्चालन नाफा ७० दशमलव १० प्रतिशत र खुद ब्याज आम्दानी ३४ प्रतिशत बढ्नाले र अघिल्लो आवमा रहेको रू. ३ करोड १२ लाख खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल हुनाले खुद नाफा बढेको हो ।
- चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा ११ दशमलव २९ प्रतिशतबाट बढेर १३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ ।
- वैदेशिक मुद्राको विनिमयबाट रू. ८ करोड ८८ लाख आम्दानी भएको छ ।
- ब्याज आम्दानी ८ प्रतिशत बढेको छ भने ब्याज खर्च ६ प्रतिशत घटेको छ ।
- कर्मचारी खर्च १५ दशमलव ८९ प्रतिशत, अन्य सञ्चालन खर्च ८ दशमलव ५९ प्रतिशत र कुल सञ्चालन नाफा २७ प्रतिशत बढेको छ ।
- बैङ्कले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रकम २६ प्रतिशत घटाएर रू. १० करोड ३७ लाखमा सीमित भएको छ ।
- पूँजीकोष लागत ४ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता १३ प्रतिशत रहेको छ ।
- निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव २४ प्रतिशत र सीडी रेशियो ७७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
- बैङ्कको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात २३ गुणा, प्रतिशेयर आम्दानी रू. १३ दशमलव ४७ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३४ गुणा छ । सो आम्दानी र शेयर मूल्यका आधारमा निकालिएको पीई रेशियो ३५ गुणा छ । हालको शेयर मूल्य नेटवर्थको करीब ४ गुणा छ ।